Manoka-baravarana hoan’ny feo isankarazany ny loka literatiora Taiwan ho an’ny mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2018 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Português, 繁體中文, English, Italiano, English
Ao Taiwan, mitombo isa ny mpiasa vahiny mpifindramonina tao anatin'ny taona vitsy ary lasa mandrafitra ampahany lehibe amin'ny fiarahamonina Taiwaney. Tokotokony ho 23 tapitrisa eo ho eo ny mponina manontolo ao Taiwan, ary mandrafitra ny tokony ho 2,3% amin'ny isam-bahoaka ny vahoaka tompotany ary misy ihany koa ireo vahiny mpiasa miisa 720.000 miasa any amin'ny sehatra indostrialy sy sampan-draharaha hafa. Avy any Azia Atsimo-Atsinanana, ary betsaka amin'izany ny avy any Indonezia, Vietnam, Filipina ary Thailandy ny ankamaroan'ireo mpiasa ireo. Tao anatin'ny 20 taona izay dia nitombo isa ireo vady avy any Azia Atsimo Atsinanan'i Azia sy ireo zanany izay manorim-ponenana ao Taiwan ary efa ho 200.000 eo ho eo ny isan-dry zareo.
Cheng Chang manazava ny antony nanetsika ny fananganana ity fifaninanana literatiora ity:
Nàng Thơ avy any Vietnam nanoratra taratasy ho an'ny ray aman-dreniny:
Tantara mampalahelo tamin'ny fiainany tao Taiwan ny sasantsasany amin'ireo sombintantara. Tamin'ny taona 2013, tantsambo maro avy any Indonezia no namono ny kapitenin-tsambo Taiwaney. Na dia nahatsapa aza ny mpitsara fa nihoa-pahefana tamin'ny tantsambo ny kapiteny, dia nodidiana higadra 14 ka hatramin'ny 28 taona ireo olona namono ny kapiteny. Tania Roos avy ao Indonezia nanoratra ny tantara miresaka amintsika momba ireo tantsambo (toy ny tantara noforonina):
Etsy ankilan'izany, feno fanantenana amin'ny hoavy ny sasantsasany amin'ireo tantara ireo. Avy any Thailandy i อนันต์ศรีลาวุธ ary miresaka ny fitiavany hira izy sy ny fahazoana namana:
Mpianatra efa nahazo ny lisansa avy any Vietnam i Lê Hoàng Hiệp ary nosoratany ny tantaran'ny vehivavy Vietnamiana iray nanambany olom-pirenena Taiwaney:
Misy ny tantara sasany miresaka voina izay nahatohina ny firenena iray manontolo. Tamin'ny taona 2014, nisy tsatok'antsy nahazo ny daholobe nitranga tamin'ny Metro tao Taipei ary nanoratra tantara avy amin'izany zava-nitranga izany i Erin avy ao Indonezia.
Avy any Indonezia i Nanik Riyati ary nanoratra ny tantaran'ny hijab izy:
Ary farany, mamehy tsara ny tanjon'ny loka fifaninanana ny teny mahafinaritr'ilay Filipiana Wala: